IJamaica Yazisa ngeeNkonzo zoMoya eziNtsha ukusuka eStockholm ukuya eMontego Bay
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » IJamaica Yazisa ngeeNkonzo zoMoya eziNtsha ukusuka eStockholm ukuya eMontego Bay
Airlines • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Caribbean • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iindaba • Iindaba zaseSweden eziQhekezayo • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Obekekileyo. Edmund Bartlett, uMphathiswa wezoKhenketho waseJamaica
Obekekileyo. U-Edmund Bartlett, Umphathiswa wezoKhenketho, uthe: “Siyavuya sisigqibo se-VING sokuphinda aqalise iinqwelomoya eziya ngqo eJamaica ebusika obuzayo. Siyakhuthazwa kukuthembela kwabakhenkethi kwindawo esisingise kuyo, kwaye inkonzo yabo yokuqesha iya kubanyusa kakhulu abatyeleli baseSweden, abadla ngokuhlala esiqithini ubusuku obuyi-14. Uqhube wathi, 'ukusukela saphinda savula imida yethu kwihlobo elidlulileyo, indawo esisingise kuyo iqhubekile nokwamkela iindwendwe ngokukhuselekileyo nangokungenamthungo. Sizilungiselele kwaye somelele kwaye siwachule ngenkathalo kumalungiselelo ethu eendwendwe kwihlabathi elisemva kwe-COVID-19. Icandelo lezokhenketho laseJamaica iyaqhuba ukukhokela iinzame zokubuyisela uqoqosho lwesi siqithi, kwaye ndiyavuya ukunika ingxelo yokuba senza inkqubela-phambili ethe gqolo ekuvuseleleni uqoqosho.”
UDonovan White, uMlawuli wezoKhenketho, uvumile wathi: “Kukhuselekile ukuthi ukhenketho lukhula ngokuthe ngcembe kwaye nemfuno yaseJamaica iphezulu. Siyavuya kuba abakhenkethi abanje nge-VING bakholelwa kwindawo ekusingwa kuyo iJamaica kwaye sijonge phambili ekwamkeleni abakhweli babo, ukonwabela amava aseJamaican angalibalekiyo kwindawo ekhuselekileyo, engenamthungo nekhuselekileyo.
UClaes Pellvik, iNtloko yeNordic yoNxibelelwano, iNordic Leisure Travel Group, uthe: "Iqela leNordic Leisure Travel liyavuya ukubuyela eJamaica kwakhona ngeenqwelomoya ezingapheliyo eStockholm-Montego Bay kwixesha elizayo lasebusika 22/23, ngakumbi ukususela kwixesha lethu elidlulileyo. impendulo yabathengi ibisoloko ilungile kwinkqubo yethu yaseJamaica. Yintoni entsha kukuba siza kusebenzisa i-Airbus A330-900neo yethu entsha kwiSunclass Airlines. Le nqwelo-moya yanamhlanje iya kunciphisa ukukhutshwa kwe-CO2 nge-23%, kwaye kwangaxeshanye ikhulise amava abakhweli. Siyibona iJamaica njengendawo ebekwe ngokugqibeleleyo kwikamva ngokugxila kwintlalontle, ukhetho oluninzi lwemisebenzi enomdla kunye nenkcubeko enokuphononongwa, kunye nemveliso yehotele entle ekhoyo. ”
I-Jamaica ibisoloko isamkela iindwendwe zase-Swedish emva kokuba imida yavulwa kwakhona ngoJuni 2020. Bonke abahambi abaneminyaka eyi-12 nangaphezulu kufuneka babonise ubungqina bovavanyo olubi lwe-antigen olwenziwa ilebhu evunyiweyo phakathi kweentsuku ezintathu zokuhamba. Uvavanyo lwasekhaya alwamkelwa. Abahambi nabo kufuneka bagcwalise ifomu yesigunyaziso sokuhamba ngaphambi kokuba bafike, nefikeleleka ngayo travelauth.visitjamaica.com.
Iiprothokholi ezibanzi zezempilo nokhuseleko zaseJamaica, eziphuhliswe ngentsebenziswano nabasemagunyeni kuwo wonke amacandelo ezempilo kunye nokhenketho, zibe phakathi kwezokuqala ukwamkelwa kweWorld Travel & Tourism Council's Safe Travels.
IZanzibar ivula iingcango ezininzi kutyalo-mali lokhenketho January 17, 2022
IPrincess Cruises iphinda iXhela ityala kwakhona kwiTyala lokuNgcoliseka kweOli January 13, 2022